Heshiiska Jabuuti iyo Fursadaha uu Kuguuleysan Karo.
Soomalida waxaa lagu tilmaami karaa in dhanka siyaasadda aay cayr ka yihiin. Sidaa darteed heshiiska Jabuuti ku dhexmaray dowlada federaalka kumeelgaarka ah iyo isbahaysiga dib u xoraynta , waa arrin muhiim ah oo mudan in lasoo dhaweeyo.waana guul siyaasi ah. Heshiiska wuxuu kaloo muujinayaa yididiilo ku aadan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee soomaalida in uu hurumar tiigsanayo. Labada dhinac ee heshiiska gaaray waay ku liiteen dhanka siyaasadda iyo diblomaasiyada taasna waxay cadaatay shirkii KHartuum labo sano kahor, markaas oo soomaalidu haysatay fursad qaali ah, sida haykal dowlad dhisan iyo nabadgelyo goboladda oo dhan siiba magaalada Muqdisho, fursadaas waala dayacay sababtuna waxay ahay ceyrnimo xaga siyaasadda .Ra'iisal wasaare Nuur cadde oo mudan iyo salaan sharaf loo taago, waayo wuxuu garoonka siyaasadda soo galay ayidoo soomaaliya uusan kajirin wax dhaqdhaqaaq siyaasadeed ah.markaas ayuu biyihii fadhiyay ku dhextuuray dhagax dhaqaajiyay. waxaa kale oo amaan mudan Sheekh Shariif oo la dhihi karo horukac siyaasadeed iyo khibrad ayaa kusoo siyaaday, islamarkii uu arkay iftiin ka bidhaamaya godka meesha ugu danbeeysa garawsaday in aay tahay fursad qaali ah oon la dayici karin, waqti iyo dadaalna siiyay sidii looga miradhalin lahaa.Heshiiska in lagaaro oo qoraal ahaan loo saxiixo way sahlan tahay laakiin cibradda waa naatiijada ugu danbeeyso oo ah fulintiisa. marka labada dhinac ee saxiixday, dowlada federaalka kumeelgaarka ah iyo isbahaysiga dib u xoraynta maxaa looga baahan yahay sidii heshiiska dhulka looga hergalin lahaa?
Dowladda Federaalka ku meelgaarka ah.
Waxay dhisan tahay dowladu mudo afar sano ah. Xubnaha ugu sareeyo waxay u badan yihiin qabqabyayaal dagaal iyo kuwo liito xaga tacliinta iyo maamulka inyar mooyaanee. Waxaan aragnay ciidamo dowladeed oo dadkii dhacayo. goboladdii iyo madaxdii laamaha oo loo magacaabayo dad aan aqoon iyo karti maamul lahayn, ciidankii oon mushaar la'aan u kala dhaqaaqay ama boobayo shacabka. waxaa lagu sheegay xukuumadda ugu musuqmaasuqa badan ee aduunka. marka dowlada sifahaas leh ma fulin karto heshiis. Ra'iisal wasaare Nuur Cade waa curiyaha heshiiska jabuuti, si dhanka uu matalyo ee dowlada heshiiska u hergeliyaan waa in uu ku dhaqaaqaa talaabooyin cad oo kalsoonida ciidamada soocelinayo. sida in ciidanka si degdeg ah mushaar loo siiyo, in saraakiisha maamusha oo dhan laga bedelo loona dhiibo saraakiil hufan khibrad u leh maamulka. Gobolka banaadir oo ah mushkiladda ugu weyn ee soomaaliya in gudoomiyaha iyo taliyaasha booliska laga dhigo shaqsiyaad khibrad iyo karti waxqabad leh lanlana xisaabtamo bil walba.
Waxaa la ogyahay in Isbahaysiga dib-uxoraynta ama Maxkamadaha Islaamiga aay kala qaybsameen dhanka siyaadda labo garab, dhanka ciidamadana dhowr jabhadood. Hadda waxaa saxiixay heshiiska Jabuuti qeybta uu hogaaminayo Sheekh Shariif oo ku tilmaami karo in uu qaatay go'aan taariikhi ah. Ciidan ugu xoogan ee gudaha soomaaliyana wuu raacsan yahay, sidoo kale dadweynaha tageero xoog leh ayuu kahaystaa. Waxaa xaqiiqo ah in ciidanka Maxkamadaha uu yahay mid iskudubaridan, nidaamsan marka la babardhigo kuwa dowladda, inkastoo askariga caadiga ah xukunka gacantiisa kufulinayo.Marka si heshiiska dhanka uu matalo Sheekh Shariif uga hirgalo. Waxaa muhiim ah talaabooyinka ah:in dhaqdhaqaaqa siyaasadda aan diblooga noqon ilaa natiijo waarto laga gaaro, barnaamij siyaasad iyo fal bani'aadam ku salaysan oon diimaysneyn la yimaadaan, in markii aay timaado waqtiga fulinta waxyaabaha qaarkood loo dulqaato, in kooxaha kale ee maleeshiyaadka leh gacan nabadeed loo fidiyo laguna soodaro heshiiska mustaqbalkooda,in shaqsiyaadka dhulka joogo ee matalyo aay noqdaan kuwa lagu doortay aqoon iyo khibrad aysan noqon kuwa lagu doortay taageero iyo walaa'a sida badanaaba maxkadaha wax kusaleeyaan.
ugu danbeeyntii heshiiska Jabuuti waa bilawga yididiilo fiican. waana imtixaan lagu eegayo hogaankeena wuxuuna mudan yahay in la taageero.
Qore: C/kariim Cabdulle Xuseen
Jabuuti:-Sheekh Aadan Madoobe "waxyaalaha madaxweynaha markii loo gudbiyo Baarlamaanku uu ku soo celinayo, ma aha kalsooni siin iyo kalsooni kala noqosho�" Akhri...